एकलकेयरबाट नि: शुल्क फ्लू शट कुपन कसरी पाउने - समुदाय | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार समाचार भारी खेल समुदाय औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु
मुख्य >> समुदाय >> एकलकेयरको साथ तपाईंको फ्लू शट बचत गर्नुहोस्
एकलकेयरको साथ तपाईंको फ्लू शट बचत गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग कहिले हिट भएको छ फ्लू , तपाईंलाई थाहा छ फ्लु मौसमको खतरा हल्का रूपमा लिनुहुँदैन। एक अनुमान To to देखि million करोड २०१२-२०२० फ्लूको मौसममा अमेरिकीहरू प्रभावित भएका थिए, सीडीसीका अनुसार। यसबाहेक, त्यहाँ २ flu,००० भन्दा बढी फ्लु सम्बन्धी मृत्युहरू थिए। फ्लू एक साधारण रोग मात्र होईन, तर झर्को लाग्ने हो। फ्लू लक्षणहरूमा थकित महसुस, ज्वरो लाग्ने, खोकी, र अधिक समावेश छ। धेरै को लागी साना बच्चाहरू, बुढापाका, र गर्भवती महिलाहरू र दीर्घकालीन रोगका साथ व्यक्तिहरू यो जीवन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
भाग्यवस, आफैलाई बचाउने एक तरीका छ: फ्लू शट। को CDC सिफारिश गर्दछ कि contra महिना वा माथिका प्रत्येकले बिना कुनै contraindication प्रत्येक वर्ष खोप प्राप्त गर्नु पर्छ। तपाईंलाई प्रत्येक वर्ष फ्लू शट चाहिने कारण भनेको फ्लु भाइरस, इन्फ्लूएन्जा वर्षौं बर्ष उस्तै हुँदैन। यो खोप प्रत्येक बर्ष अपडेट गरीन्छ जुन त्यस मौसममा प्रसारण गर्ने तनावसँग मिल्छ। थप रूपमा, CDC ले एक वार्षिक खोपको सिफारिश गर्दछ किनभने तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई भाइरस बिरुद्द बार्षिक सुरक्षाको आवश्यक छ।
सम्बन्धित: फ्लू शट १०१
यद्यपि धेरै व्यक्तिहरू फ्लू खोप लिनबाट जोगिनुहोस् लागत को कारण। सिंगलकेयरले त्यसलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं एक उच्च घटाउन असीमित, वा मा संग बीमा छन् कि मेडिकेयर , एकलकेयरले खोपको बाहिरको जेब लागत अफसेट गर्न मद्दत गर्दछ।
४० बर्ष भन्दा माथिका महिलाहरुको लागि जन्म नियन्त्रण विकल्प
एकलकेयर एक निःशुल्क पर्चेसन कार्ड हो जुन अमेरिकामा जो कोहीलाई उपलब्ध छ र दुबै प्रिस्क्रिप्शन र खोप दुवैमा पैसा बचत गर्न मद्दत गर्दछ। सिंगलकेयरको फ्लू शट कुपनहरू हाम्रो कुनै पनि पार्टनर फार्मेसीहरू जस्तै वालग्रीन, वालमार्ट, र सीवीएसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सबै भन्दा राम्रो, कार्ड प्रयोग गर्नको लागि अविश्वसनीय सजिलो छ: फार्मेसी भ्रमण गर्नु अघि तपाईंको प्रिस्क्रिप्शन (वा फ्लू खोप!) को लागि खोज्नुहोस् वा काउन्टरमा तपाईंको फार्मासिष्टलाई तपाईंको कार्ड वा अनुप्रयोग संसाधित गर्न भन्नुहोस्। जबकि एक ईन्जेक्शन (जस्तै फ्लुजन वा फ्लब्लोक ) सबैभन्दा सामान्य हो, त्यहाँ नाक स्प्रे पनि छ ( फ्लुमिस्ट) , जुन २ देखि years years वर्ष बीचका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्न सक्दछन्। केहि फ्लू खोपहरू तुच्छ हुन्छन्, यसको मतलब उनीहरू ईन्फ्लूएन्जाको तीन प्रकारबाट संरक्षण प्रदान गर्दछ। अरूहरू चतुर्भुज छन्, यसको अर्थ उनीहरू चार इन्फ्लूएन्जा तनावबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। 65 65 बर्ष वा माथिका व्यक्तिका लागि, चिकित्सकहरूले उच्च-खोप खोपको सिफारिस गर्छन्, जसमा अन्य खोपहरूको चार गुणा सुरक्षा हुन्छ।
हामी हाम्रो विशेष फार्मेसी साझेदारीको कारण कम, लगातार मूल्य निर्धारण गर्न सक्षम छौं, त्यसैले तपाईंको फ्लू शट छुट तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको फ्लू शट र फार्मेसीमा निर्भर हुनेछ।
सम्बन्धित: कसरी छुट वा नि: शुल्क फ्लू शट प्राप्त गर्ने
फ्लू शटले ग्यारेन्टी दिदैन तपाई फ्लू पाउनुहुन्न, तर यो तपाईले फ्लू समात्न सक्ने सम्भावना कम गर्न देखाईएको छ %०% -60०% । र, यदि तपाईं बिरामी हुनुभयो भने, यसले तपाईंको लक्षण तीव्रता कम गर्दछ र तपाईंको फ्लू सम्बन्धित जटिलताहरू विकास गर्ने संभावनाहरू। आज फ्लू खोपमा बचत गर्न सिंगलकेयर प्रयोग गर्नुहोस् र स्वस्थ गिरावटको अनुभव गर्नुहोस्।
वास्तविक प्रयोगकर्ता समीक्षामा आधारित, फेसबुक टिप्पणीहरू हिज्जे र स्पष्टताको लागि सम्पादन गरियो।
गर्भावस्थामा आईबीएस लक्षणहरू सुरक्षित रूपमा कसरी प्रबन्ध गर्ने
टोपामाक्स साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
बीमा बिना adderall xr २० मिलीग्राम को लागत
कसरी थाहा छ यदि योजना बी काम भयो
औषधिको सूची हो कि तौल बढ्छ
टाइप ए र बी फ्लू को बीच के फरक छ?
एन्टिबायोटिक को सूची हो कि खमीर संक्रमण को कारण
meloxicam 15 मिलीग्राम को लागी प्रयोग गरीन्छ?